विराटनगरको मुहार फेर्ने योजना छ- ढकाल – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
विराटनगरको मुहार फेर्ने योजना छ- ढकाल
विराटनगरको राजनीतिमा विनोद ढकाल नयाँ नाम होईन । यहाँको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा शसक्त ढङ्गले क्रियाशिल व्यक्तित्व हुन ढकाल । हरेक समुदायका समस्या सुन्ने र त्यसलाई तत्कालै सुल्झाउनका लागि क्रियाशिल हुने विशेषता ढकालमा छ । विराटनगरको महत्वपूर्ण विकासका आधारहरुलाई अघि बढाउन उनी जननिर्वाचित प्रतिनिधि भन्दा वढी नै समय दिएर लाग्ने गर्दछन् ।
विराटनगरका बौद्धिक व्यक्तित्वले ढकाल अहिलेको सन्र्दभमा एमालेको हेविवेट उम्मेदवारका रुपमा लिन्छन् । वि.स.२०२५ साल चैतमा भोजपुरको याङपाङमा जन्मिएका ढकाल वि.स.२०४१ सालदेखि विराटनगरको राजनीतिमा सक्रिय छन् । स्थानीय शारदा माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरि विराटनगर आएका ढकालले वीएल सम्मको अध्ययन गरेका छन् । एमाले अखिलको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष हुँदै वि.स.२०५० सालमा संगठन विभाग प्रमुख भएका ढकाल वि.स.२०५५ सालमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सम्म भए । वि.स. २०६६ र वि.स.२०७३ मा उनी निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष भएका हुन् । उनै ढकालसँग गरिएको कुराकानी ः
कस्तो चल्दैछ चुनावी गतिविधि ?
उम्मेदवारी मनोनयन भएपछि चुनावी प्रचारले गतिलिने छ । अहिले कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने र आगामी दिनमा विराटनगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने छलफल र बहसमा वितिरहेको छ । सुभेच्छुकहरुको शुभकामना लिने र वार्डमा भएका गतिविधिहरुमा सहभागि भई चुनावी गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ ।
विराटनगरमा मुलतः कस्लाई प्रतिष्पर्धी देख्नुहुन्छ ?
विराटनगरको विगतको चुनाव हेर्दा नगर क्षेत्रबाट सांसदमा काँग्रेसले जितेको भएपनि स्थानीय निकायको चुनावको पुरानो तथ्यांक हेर्दा हामी अगाडी छौं । पछिल्ला समयमा राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा नेकपा एमालले लिएको नीति र एमालेको नेतृत्वमा वनेको सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्दा एमालेको प्रतिष्पर्धी नै नहुनु पर्ने हो । तर पनि यहाँ काँग्रेससँग नै एमालेको प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।
काँग्रेस लगायतका अन्य पार्टीहरुलाई पराजित गर्ने एमालेसँग के एजेण्डा छ ?
विराटनगरबाट काँग्रेसका धेरै दिग्गजहरुले नेतृत्व गरे । गिरीजाप्रसाद कोइराला जस्ता आदरणीय नेताले पनि विराटनगरबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनु भयो । तर विराटनगरले केही पाएन । अर्थमन्त्री समेत काँग्रेसबाट धेरै भए । तर, विराटनगरले कुनै उल्लेख्य सुधारको संकेत सम्म पाएन । यसर्थ आम जनताले बुझेका छन्, स्थानीय तहमा एमालेको नेतृत्वमा नै विकास हुन्छ । यसकारण पनि एमालेले अरु पार्टीलाई पराजित गर्छ । यो सामान्य जनताले बुझ्ने विषय हो । एमाले अहिले विराटनगरलाई समृद्ध शहर र प्रदेशको राजधानी बनाउने योजनाका साथ आएको छ । त्यसैले पनि एमालेले सवैलाई पराजित गर्छ ।
विराटनगर राजनीतिक तथा ऐतिहासिक नगरी हो । यसको महत्व र पहिचान जगाउन सक्नुहुन्छ ?
विराटनगरलाई महानगर नबनाउन विभिन्न तौर तरिका अपनाएर षडयन्त्र गरियो । जिविसमा देशका ठुला भनिएका पार्टीका नेताहरुले नै विराटनगरलाई महानगर नबनाउन दवाव दिए । हामीले विराटनगरको पहिचानलाई जोगाईराख्न बृहत्तर विराटनगरको कुरा ग¥यौं । तर यो कुरा काँग्रेसलाई पचेन । यो परिवेशमा नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी हो, विराटनगरलाईै महानगर बनाउनु पर्छ भनेर निर्णय गर्ने । हामीले निर्णय मात्र गरेनौं । यसमा मधेशबादी दललाई समेत सहमति गरायौं । र, निरन्तर महानगरका लागि खवरदारी र आन्दोलन ग¥यौं । यस्ले नै के वुझिन्छ भने हामी विराटनगरको पहिचान जोगाउन काम गरिरहेका छौं । भविष्यमा विराटनगरको ऐतिहासिकता जोगाउन रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालन र यहाँका उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र राजनीतिक नगरीको पहिचान जोगाउन अग्रज तथा आदरणीय नेताहरु मनमोहन, विपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मरण गर्ने संग्राहलय समेत बनाएर विराटनगरको ऐतिहासिक र राजनीतिक पहिचान जोगाउँछु । र, यो देशकै पहिचान युक्त शहर हुने छ ।
विराटनगरका बनाउन तपाईले उद्घोष गर्नु भएका विषयहरु के हुन ? जुन विषयहेरेर मतदाताले तपाईलाई भोट दिन सकुन ?
विनोद ढकाल प्रदान कुरा हैन । एमाले सामुहिक निर्णय र पार्टीको निर्दिष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढेको तमाम श्रमजीविहरुको पार्टी हो । पार्टीले बनाउने योजना र घोषणा पत्र नै मेरा कामका फेहरिस्त हुन् । तथापी विराटनगरलाई अघि बढाउनका लागि म विराटनगरको भौतिक पूर्वाधारमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई केही समय भित्रै व्यवस्थित गरि कामलाई चाँड टुङ्गो लगाउने छु । विराटनगरका लक्षित वर्ग दलित र सुकुम्वासीहरुका लागि एकिकृत वस्ती निर्माण गर्ने छु । नगर भित्र पछाडी पारिएका मुसहर, डुम लगायतका विपन्न वर्गका लागि काम गर्ने छु । विराटनगरका व्यस्त वजारमा तत्कालै आकासे पुल बनाउने योजनाहरु ल्याउने छु । दुई वर्ष भित्र विराटनगरका उद्योगीले माग गर्दै आएको विशाल औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रर्दशनी स्थल निर्माण गर्ने छु । शहरी योजना बनाएर दिगो शहरी विकास, कोशी मेडिकल कलेज र स्पोर्टस् भिलेज निर्माण गर्ने छु । महिलाहरुका लागि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु । सुत्केरी महिलालाई दिइदै आएको प्रसुति विदा समय बढाउने छु । विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छु । जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा देखि घर–घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पु¥याउने योजना ल्याईने छ । विराटनगरलाई हरित नगरी बनाउने योजना पनि अघि सार्ने छु ।
विराटनगरको दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरु कस्ता छन् ?
विराटनगर हुँदै किमाथांका सडकलाई अघि बढाउन दवाव सिर्जना गर्ने छु । यही ५ वर्ष भित्रमा चक्रपथमा सवारी साधन दगुर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छु । विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने र यसको ऐतिहासिक परिचयलाई जिवन्तता दिने छु । विराटनगरको ओद्यौगिक र राजनीतिक परिचयलाई कायम राख्ने महत्वपूर्ण योजनाहरु अघि सार्ने छु ।
विराटनगलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन तपाई कस्तो भूमिका हुने छ ?
विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन व्यापक पहल र प्रयत्न गर्ने छु । विराटनगरमा यस्तो खालको लविङ गरेर सवैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता म सँग छ । सवैलाई एकिकृत गर्ने मात्र हैन, विराटनगर बाहिर पनि यसलाई राजधानी बनाउन लविङ गर्ने क्षमता म राख्छु । यो क्षमता राखेर मात्रै भएन । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न र निर्माण गर्न म तत्कालै काम शुरु गर्ने छु । विराटनगरमा ६ लेनको बाटो निर्माण शुरु भैसकेको छ । चक्रपथको निर्माण दु्रत गतिमा गरिने छ । वीरेन्द्र सभागृह देखि लिएर यस्ता थुप्रै नयाँ पुराना भवनहरुलाई स्तरोन्नती गरि प्रयोगमा ल्याईने छ । विराटनगर भित्र भएका नगरको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरिने छ । विराटनगरमा मेडिकल कलेज देखि नाम चलेका उच्च शिक्षा सञ्चालन हुने कलेजहरु पनि छन् । जस्ले गर्दा विराटनगरको पूर्वाधार वलियो छ । यहीँबाट प्रदेशको राजधानी बनाउने हामीलाई अवसर छ । हामीसँग ऐतिहासिक पहिचान छ । उच्च अदालतको भव्य भवन छ । क्षेत्रीय कार्यालयका भवनहरु थुपै्र छन् । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय देखि लिएर क्षेत्रीय स्तरका कृषि कार्यालयहरु पनि विराटनगरमा भएकाले विराटनगर प्रदेशको राजधानी बन्छ । विराटनगर विमान स्थललाई क्षेत्रीय बनाउने हाम्रो हिजोदेखिको प्रयत्न साकार हुने छ । र, यि सवै कुराबाट म विश्वस्त छु । विराटनगर प्रदेशको राजधानी बन्छ । यो बनाउने म प्रतिज्ञा गर्छु ।
विराटनगरको औधोगिक विकासका लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
विराटनगरको पहिचान नै औधोगिक नगर हो । यसको पहिचान जोगाउनका लागि पनि रुग्ण उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउन विशेष पहल हुनेछ । यहा“का उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले प्रयत्न गर्नेछ । म निर्वाचित हुने वितिक्कै यो पहल देखिनेगरी शुरु गर्नेछु र मेरै पालामा यो काम सम्पन्न हुनेछ । यहा“का उद्योगी व्यवसायीलाई स्थानीय तहमा हुने करमा सहजीकरण र सरलीकृत गरिने छ । कुनैपनि उद्योगी व्यवसायीले विराटनगर महानगरपालिकाबाट असन्तुष्टिको स्वर सुन्नुपर्ने छैन ।
युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने के योजना छ ?
मुलतः घोषणापत्र मार्फत योजनाहरु ल्याइएको छ । तरपनि युवाहरुका लागि खेल मैदान, व्यायमशालाहरु निर्माण गरिनेछ । उच्चशिक्षा लिन बंचितहरुका लागि उच्च शिक्षामा पहु“च पु¥याउने र सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरु हुनेछन् । विराटनगरमा क्रियाशिल युथ फर ब्लड, युवा अभियान जस्ता परिश्रमी युवाहरुका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरिने छ । युवाहरुलाई स्वयंसेवी अभियानमा पनि सहभागी गर्ने र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमहरु ल्याइने छ । विराटनगरमा एमालेकै पालामा युवाहरुले अनुभुति गर्नेगरी उदाहरणीय काम हुनेछ ।
विराटनगरमा मधेशी तथा मुस्लिम समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ । उनीहरुका समस्यालाई कसरी संवोधन गर्नुहुन्छ ? त्यहीमाथि तपाईहरुलाई मधेश विरोधीके रुपमा पनि हल्ला गरिदैछ । यस्तो वेलामा के छन खास कार्यक्रम ?
हाम्रो पार्टी एमालेले हिजो पनि मधेश विरोधी थिएन र भोली पनि हुने छैन । हामी मधेशी जनताको हितकै लागि वर्ग संघर्षको कुरा गरेर आयौं । नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो । जस्ले २०५१ सालमा ल्याएको वजेट देखि एक वर्ष अघिको पार्टी अध्यक्ष आदरणीय केपी ओली नेतृत्वमा वनेको सरकार मार्फत गरिएका कामबाट छर्लङ्ग हुन्छ एमाले कस्तो पार्टी हो भनेर । २०५१ सालमा एमालले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने कार्यक्रम नल्याएको भए तराईका धेरै वस्तीहरु अझै पनि डुवाउ र अविकसित रहन्थे । केपी ओलीको सरकारले मधेशमा हुलाकी मार्ग निर्माण सदरमुकाम निर्माण र मधेशका गरिवहरुका लागि सुरक्षित आवासको कार्यक्रम ल्याएको छ । देशमा हाली मुहाली गर्ने काँग्रेस कथित क्रान्तिकारी भन्ने माओवादीले समेत मधेशी जनतालाई यत्तिको वजेट छुट्याएनन् । पञ्चायत कालदेखि हालि मुहाली गर्दै आएका कतिपय मधेशी नेताहरु गणतन्त्र काल सम्म पनि मन्त्री भए । तर, मधेशी जनताको कहिल्यै हित गरेनन् । यी सवै तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्नुहोस् । एमाले भन्दा अरु कुनै मधेशबादी छैन । छन् भने शब्दमा मात्रै छन् व्यवहारमा छैनन् । हामीेले मस्लिमका विषयम पनि कुरा उठाएका छौं । पछिल्लो समय मुस्लिमहरुलाई मतदानबाटै बञ्चित गर्ने प्रयत्न गर्दा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने हामी नै हो ।
विराटनगरमा भूमीहीन हरुको उल्लेख्य वसोबास छ । उनीहरुका लागि तपाईको के योजना छ ?
हाम्रो पार्टीले घोषणा पत्र मार्फत एकिकृत वस्ती निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । हामी निर्वाचित हुने वित्तिकै देखि एकिकृत वस्ती निर्माणको अभियान शुरु गरिने छ । यसबाट भूमीहीन मात्रै हैन मधेशमा सँधै पछाडी पारिएका मुसहर समुदाय पनि लाभान्वित हुने छन् ।
तस्वीर- पुष्पराज थपलिया